Nang Rong District, Buri Ram, Thailand
Igumbi lakho lokulala e indlu encinci sinombuki zindwendwe onguViphathip
Indawo yethu ibekwe eNangrong, eBuriram. Ukufikelela ngokulula kwiSekethe yaMazwe ngaMazwe yaseBuriram (imizuzu eyi-40 yokuqhuba), iSurin (isixeko seendlovu), iSa Kaew (umda weThailand kunye neKhambodiya), kunye nokunye okuninzi ukuya eMntla Isarn.
1 umgangatho, 2 amagumbi, 5 iibhedi. Ayinkulu, kodwa ayincinci kakhulu. Kufutshane nemarike yasekhaya, i-24-7 mini-mart, kunye nesibhedlele esikhulu saseNangrong (imizuzu eyi-15 uhamba). Yindawo ezolileyo nekhuselekileyo. Cebisa abahambi abaya kufuna ukuzimela ngoxolo.
Umbuki zindwendwe ngu- Viphathip
Ngamanye amaxesha, asizukwazi ukubakho ngalo lonke ixesha, kodwa siya kuhlala sinxibelelana ngomnxeba nangobubele obuvela kubantu basekuhlaleni abanobuhlobo esibajongileyo ukuba babe kwiinkonzo zakho.